Galmudu oo u jawaabtay Puntland & Go'aana kasoo saartay xanibaada Gaadiidka Puntland ay Xayirtay (Aqriso 8 Qodob) - Caasimada Online
Home Warar Galmudu oo u jawaabtay Puntland & Go’aana kasoo saartay xanibaada Gaadiidka Puntland...
Galmudu oo u jawaabtay Puntland & Go’aana kasoo saartay xanibaada Gaadiidka Puntland ay Xayirtay (Aqriso 8 Qodob)
Muqdisho (Caasimada Online)-Shir degdeg ah oo ay isugu yimaaden Golaha Wasiirada maamulka Galmudug ayaa waxaa looga hadlay cakiran ee kataagan magaalada Gaalkacyo.
Shirka ayaa waxaa shir guddoominaayay Madaxweyne ku-xigeenka ahna ku-simaha Madaxweynaha, ayaa waxaa lagu gorfeeyey arrimaha Amniga, Siyaasadda iyo Dhaqaalaha, islamarkaana waxaa si gaar ah diiradda loogu saarey arrimaha cakiran ee kataagan magaalada Gaalkacyo.
Shirkaani degdega ah ayaa waxaa laga soo saaray 8 qodob oo kala ah:-
1-Sidii aan horey u sheegnayba waxaan aamin sanahey in isku-socodka shacabka iyo madax-banaanida ganacsigu ay laf-dhabar u yihiin nolosha shacabka soomaaliyeed, gaarahaan shacabka Galmudug iyoPuntland.
2-Mar labaad waxaan kadigeynaa in xanibaad iyo kala qoqob kasta oo lagu sameeyo iskusocodka shacabka walaalaha ah iyo madax banaanida ganacsigooda uu horseedi karo burbur dhaqaale iyo amni darro baahda.
3-Waxaan tuhun sannahay in go’aamadaas ay yihiin kuwo dad yar oo kujira xukuumadda Puntland ay dano qarsoon oo gaar ah ka leeyihiin, ayagoo mar marsiiyo kadhiganaya arrimo amni, isla markaana aysan ka turjumeynin danta rabitaanka iyo maslaxadda shacabka iyo ganacsatada Puntland.
4-Waxaan ka xunnahey qasaaraha ka dhashey go’aamada aan lagafiirsan ee ay gaadhey Puntland kuwaas oo keenay in 48 saacadood la xanibo gawaari sida xoolo nool, qudaar, raashin iyo badeecooyin kale, sababeyna in xoolihii baqtiyaan, qudaartiibaaba’do, ayna ka dhasheen burbur dhaqaale oo xoogleh, kuwaas oo kazoo horjeeda qaanuunka ganacsiga, horumarka, soomaali nimada iyo garashada wanaagsan ee biniaadamka.
5-Waxaan kuwar gelineynaa Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Bulshada Caalamka in ay si dhow u la socdaan ilgaar ahna ku hayaan ficilada ay Puntland sameyneyso oo ah kuwo xadgudub ku ah heshiis kii ay Galmudug iyo Puntland gaareen 2dii bishii December 2015 ayna goob joog ka ahaayeen Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Bulshada Caalamka. Jamhuuriyadda Faderaalka Soomaaliya
6-Waxaan ka xunnahay dhibaatada ku dhacday ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeed waxaanna muujineynaa walwalka aan ka qabno arrinkaas, wixii cawaaqib-xumo dhaqaale, amni, iyo bulsho ah ee ka dhasha go’aamadaasna ay Puntland dusha-uridandoonto.
7-Waxaan u soojeedineynaa Maamulka Puntland in ay kawaan toobaan falalka xambaarsan daandaansiga iyo colaad-abuurka ee ay ku kacayaan, ayagoo mar marsiiyo ka dhiganaya arrimo amni.
8-Waxaan soo dhoweyneynaa kuna dadaaleynaa waxkasta oo soomaalinimada, midnimada umadda Soomaaliyeed, walaal tinimada, iyo deris nimada xoojinaya.